Qaybta 1.Apple Music iyo Spotify Music
Qaybta 2.Catalogue of Music
Qaybta 4.Audio Quality
Qaybta 6.Radio Services
Qaybta 7.Discovery of Music
Muuqaalada Qaybta 8.Additional
Qaybta 9.User interface
1.Apple Music iyo Spotify Music
Spotify waa erey caan ah ee dhammaan dunida music sida hawl ogol geeyo ee jecel raadkaagu. In kastoo ay jiraan adeegyo kale oo badan sida Goyiim, Rhapsody, Rdio iyo kuwa kale oo ay bixiyaan nooca la mid ah music adeegyada geeyo laakiin mid si fudud loo xukumi karaa Lagaga ee Spotify ee qeybta this. Waxyaabaha haatan u muuqdaan in ay waddo oo kala duwan oo wakhtiga soo socda la Apple bilaabay adeeg geeyo music ugu dambeeyey - Apple Music. Galitaanka Apple ee suuqa ee tartan rasmi ah ee warshadaha geeyo music hubaal ka dhigi doonaa tartanka xitaa kulul.
Apple Music lagu dhawaaqay 8aad ee June, 2015 at WWDC iyo hadda adeegyada la bilaabay on 30-kii June. Adeegyada hadda diyaar u yihiin inay la soo bixi on PC, nidaamka MAC iyo qalabka macruufka. Oo weliba Apple Music noqon doonaa si toos ah laga helayaa ay iPad iyo iPhone la macruufka 9.0 update kaas oo la qorsheeyay in la heli karo in ka qayb dambe ee bishan.
Sidaas u jeclaa oo dhan music u samaynta ku kala dooran karo Apple Music iyo Spotify waxa uu noqon doonaa hawl adag. Labada adeegyada uu ka tagi doono dhagax u baarto si ay u soo jiitaan dadka isticmaala kara iyo in ay sii haystaan ​​kuwa hadda jira. Hoos siiyo waa la isbarbar dhigo Apple Music iyo Spotify oo la socday, sida xaqiiqada ah si aad hawsha doorashada mid wax yar ka sahlan.
2.Catalogue of Music:
Marka ay timaado in adeegyada geeyo music, buugga music door aad u muhiim ah. Ka hadalka u Apple Music iyo Spotify ee jeer la joogo, oo labadoodaba waxaa ka muuqataa in ay isku la collection of 30 million songs kasta madal. In kastoo si ay u soo jiitaan dadka isticmaala ku, Apple Music ayaa sheegtay in ay kordhin doonaan heeso badan gaar sidoo raad ka fanaaniinta kala saxiixan in ay liiska.
Labada Apple Music iyo Spotify awood u user si ay u kaabaan haayaha barta ay la music u gaar ah. Isticmaalka adeegyada Spotify mid ka mid noqon kara files music laga heli karaa computer iyo sidoo kale iyagoo aad ku dartid playlist jira. Iyadoo Apple Music, taas oo aad ku riday ilaa in aad xisaabta Lugood waxaa si toos ah daray. Laakiin haddii aad tahay taageere Taylor Swift markaas hubaal Apple Music guuleysan doono qalbiyada sida ay u suurtagashay in ay hesho isaga ku saabsan adeegyada ay.
Price Sidoo kale waa arrin wayn oo go'aan ka halka xulashada adeegga geeyo music ah. Adeegyada Apple Music la bilaabay on 30 June oo waxaa laga heli karaa sida update lacag la'aan ah ee dadka isticmaala ee iPad, Mac, iPhone, Windows PC iyo iPod Touch. Marka aad cusboonaysiiso software, adeegyada laga heli doonaa Lugood aad kombuutarka iyo Music app ku saabsan qalabka macruufka. Si ay u soo jiitaan dadka isticmaala ku Apple Music bixin doonaa adeegyada ay lacag la'aan ah oo ah qiimaha muddo seddex bilood ah iyo in ka dib markii £ 9.99 bishiiba oo la xisaabin doono.
Waayo, kuwa aan rabin in ay ku riday rar jeebkooda, version xor ah oo ka mid ah adeegga Apple Music sidoo kale waa la heli karaa, laakiin waxaa kaliya ee la iman doonaa feature Connect oo sahli doonto in aad aragto ama raac fanaaniinta ah laakiin ma ciyaari, badbaadiyo ama la mid ah kuwan raadkaygay. Xirmo Qoyska waxaa la siinayaa by Music Apple halkaas oo 6 qof oo waxay noqon kartaa qayb ka mid ah xirmada kaas oo ka yimaadaa qiimo dhan £ 14,99 bil kasta.
Marka ay timaado in binta, dhibcaha Spotify fiican ay sabab u tahay qaababka ay ku daray oo tas-hiilaadka. Waayo, kuwa oo dhan isticmaala oo wax kama qaba isku tanaasulkii tayada, Spotify bixisaa khiyaar ah ee Streaming ad taageerto halkaas oo dadka isticmaala qulquli karaan track ah oo lacag la'aan ah, laakiin waxa ay yeelan doontaa content ad. Marka ay timaado in caymiska ama la bixiyay ee Spotify, waa isku mid sida Apple Music- £ 9.99 bishii. Spotify kale oo uu leeyahay ikhtiyaar ah account qoyska halkaas oo tirada guud ee shan xubnood oo noqon kartaa qayb ka mid ah xirmada in kharash £ 29,99. Dhimis A arday dhan £ 4,99 waxaa sidoo kale ay bixiyaan Spotify ee The Times ay premium oo si xaqiiqo ah u dhaqmo sida dhibic bonus adeeggan ah.
Tani waxay si siman u ahaa urur weyn oo muusikiiste ah. Tusaale ahaan, Jimmy yaabaa aan laga badin ee gitaarka, John Bonham soo saaray ku garaaca durbaanka ugu wanaagsan, kaliya in la xuso, laakiin afew. Waxaad ku heshiin doonaa ila tahay in mid kasta oo ka mid ah heesaha ay ahaayeen kaliya u fiican. Had iyo jeer waxay noqon doonaan legendries farshaxanka weyn ee music casriga ah.
Oo maalintaas seenyada joogo, Spotify la oran karo waa in ay tahay doorasho fiican marka la eego sida waafaqsan jiro app Spotify ah oo taageeraya Mac, qalabka macruufka, phone Windows iyo sidoo kale Android. Music Apple waqtiga xaadirka ah ma laha app ah qalabka Android iyo Windows. Oo weliba app ee Apple TV waxa kale oo aan la filayaa sida ugu dhaqsaha badan.
In kastoo adeegyada raadiyaha ayaa diyaar u ah Spotify iyo sidoo kale Music Apple laakiin labadooda heysano hannaankii shaqo oo kala duwan. Waxaa jira saldhiga nool iyo 24X7 caalamka radio loo yaqaan Beats 1 ee Apple Music webiyo ka LA, London iyo New York. Si loo sameeyo waayo-aragnimo raadiyaha oo xiiso leh iyo raaxo, DJ ayaa waxaa sidoo kale ka soo kiraysteen by Music Apple. The saldhigyada Apple Music Radio sidoo kale bixisaa fursad u isticmaala inuu aado music ku salaysan noocyo kala duwan oo sidaas waa inaad xitaa ka boodi kartaa dhowr heeso si ay u habayn in saldhigyada.
In kastoo ma jiraan wax radio live adeegyada Spotify laakiin waxa ay awood u user in la abuuro xarumo idaacadeed iyaga u gaar ah oo ku saleysan jecel heesaha, fannaaniin, qaybaha, albums iyo shuruudaha kale iyo heeso iyaga dhigma doonaa. Saasuuna radio adeegyada saldhigga by Spotify yihiin baahida iyo awood aad ku raaxaysan music Joogsila'aan saacba. Oo weliba waxaad xitaa ka dhigi kartaa Spotify garto aad doorato ilaa codbixinta ama hoos u codaynaya heesaha.
7.Discovery of Music:
Spotify iyo Apple Music labada isku dayo in la fahmo Dooratay dadka isticmaala ay qaataan laakiin hab oo kala duwan si la mid ah sameeyo. Talo soo jeedintii ka soo Music ah Beats waa la Apple Music si ay u fahmaan doorashada iyo talooyin isticmaala. Apple sheegayaa in ay la socdaan geynta waxa ay sidoo kale ka dhigaysa isticmaalka aadanaha si ay u qaado music iyo abuuro playlist ah. Waxaa jira waa "Waayo, waxaad" tab ee music Apple in qabanaysa la talooyinka aad sida aad xulan kuwan raadkaygay aad doorato.
Talooyinka ka Spotify joogaan qaybta Baro taas oo la joogo in tab Browse ee app. Spotify tixgeliyaan taariikhda dhagaysto dadka isticmaala si ay u tixgeliyaan talooyinka.
Ka sokow kor ku siiyo, waxaa jira liis ah muuqaalada dheeraad ah ku sugan Apple Music labada sidoo kale Spotify. Muuqaaladan ee Spotify badan yihiin gudanayaa ku riyaaqayaa music xaaladaha kala duwan halka Music Apple waxay u badan oo la xidhiidha in la xiran artist aad ugu jeceshahay.
Muuqaaladan ee Spotify waxaa loogu talagalay in hab si ay awood u aad ku raaxaysan jecel raadkaagu ka raaxada ee gurigaaga iyo sidoo kale xaafada. Waxaa jira feature loo yaqaan Orodka cusub in uu ogaado Isbadalo ee aad ku socda oo sidaas muusig ah oo kulan degdeg ah. Mid ka mid ah ka dib markii song kale u xajiya, engegay inuu midba midka kale si aad u sii wado kartaa Isbadalo waxaana la dhiiriyo. Qalabka dhisay-in ka mid ah Spotify sidoo kale awood user in ay ku raaxaystaan ​​jecel raadkooda iyada oo ku hadla dibadda. Spotify sidoo kale u ogolaataa isdhexgalka la Facebook iyo goobaha kale ee bulshada si aad u ogaato waxa saaxiibada ugu wanaagsan ee aad dhagaysanayso iyo xitaa iyaga raac. Xitaa in aad la wadaagi karto songs xulay leh dadka aad jeceshahay iyada oo mails, WhatsApp, fariin qoraal ah oo dhufto ee bulshada kala duwan.
In Music Apple, qaybta Connect ka sokow bixinta adeegyada music salaysan sidoo kale u dhaqmo sida madal bulshada halkaas oo fanaaniinta taageerayaasha ay la wadaagi karaan ay lyrics, sawirada, videos, iyo waxyaabaha kale. Sida user a aad xitaa jeclaan karaa oo faallo ka kooban kuwaas. Apple ayaa sidoo kale sheegtay in wakhtiga soo socda, ay adeeg u shaqeyn doonaa boosteejo ah oo ku fanaaniinta cusub si ay u soo bandhigo iyo sidoo kale kor u qaadaan oo ay music sida. Apple Music kuu ogolaanaya qaybsiga heeso ama playlist ah oo keliya AirDrop, qoraalka, Facebook, twitter iyo email. Waxaa jira wax aan ku Apple Music in bulsho ahaan xirmaan saaxiibada ugu wanaagsan
Marka ay timaado in user interface, Apple Music labada sidoo kale Spotify ayaa design ka raadinaya fudud. Laakiin marka aad si dhab ah u shaqeyn doono labada adeegyada, waxaad ka heli doontaa farqiga dhabta ah ee ay u isticmaalaan halka ay Apple waa yara adag in muuqaalada halka Spotify bixiyaan hawlaha siman. Labada adeegyada la timid 3 badhamada oo ka wakiil artist, album iyo track ama horyaalka ah laga bilaabo fog midig. Mid kasta oo ka mid ah saddex badhamada ayaa menu la doorasho kala duwan.
Shaki kuma jiro oo ku saabsan xaqiiqada ah in Apple Music iyo Spotify aad la mid ah dhinacyo kala duwan yihiin, laakiin sidoo kale waa run in labada bixiyaan set badan oo kala duwan oo ah adeegyada iyo sidoo kale waayo-aragnimo. Waa xilli hore in la xukumi ama is barbar labada adeegyada sida Spotify ayaa ay cagta oo duurka ku halka Apple Music waa uun xubin cusub uu noqon doono. Waayo, kulli kuwii ku caashaqi jiray music oo hore u isticmaali jiray adeegyada Spotify siin karaa fursad ay ku Apple ay ku riyaaqayaa adeegyada ay lacag la'aan ah muddo saddex bilood ah ugu. Haddii ay u arkaan in ay ka wanaagsan marka loo eego Spotify, ay dooran karaan Times albaabada kale ee Spotify ay mar walba furan yihiin.
2 Siyaabaha Download Soundcloud playlist Gacanta iyo Isticmaalka Soundcloud playlist Do
> Resource > Music > Apple Music Vs Spotify Music